Home Wararka Beesha Caalamka oo maanta si kulal ula hadli doonta Madaxda Soomaalida
Beesha Caalamka oo maanta si kulal ula hadli doonta Madaxda Soomaalida
Shirkii Golaha Watashiga Qaran ayaa maanta waxaa ku biiryay qaar kamida xubnaha Beesha Caalamka ee xaruntoodu tahay Xalane. Kulanka ayaa lagu sheegay inuu yahay mid Beesha Caalamku ay dooneyso inay si adag ula hadasho Madaxda Soomaalida.
Qodobada laga hadlayo ayaa waxa kamida turxaan bixinta doorashada, musaqa iyo khilaafka ku gadaaman geedisocodka doorashada. Beesha Caalamka ayaa sidoo kale ka hadli doonta maalgalinta doorashada.
Waxaa xaqiiqdii nasiib xumo ah in madaxdii Soomaalida maanta loola hadli sidii caruurta iyada oo lagu waanin doono inay u naxaan una turaan dadkooda iyo dalkooda.
Previous articleWhy Somalia’s Mohamed Abdullahi Farmaajo Should Face Treason Charges
Next article[AKHRISO AJANDAHA] Beesha caalamka oo ku biirtay shirka golaha wadatashiga
Xasan Kheyre oo bilaabay qorshe lagu fashilinayo gudiga cusub ee Doorashada...
(Daawo) Guddigii Baarista oo sheegay in hub loogu geeyay Shabab gudaha...